ကြေးသတ္တုများပုံသွန်း - သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူ Casting - Minghe Casting
Die Casting ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအထူးဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထူးပြု
102, အမှတ် 41, Changde လမ်း, Xiaojiejiao, Humen မြို့, Dongguan, တရုတ် | + 86 769 8151 9985 | sales@hmminghe.com
Die Casting တိုင်ပင်ဆွေးနွေး
ပါးလွှာသော Wall Die Casting
Cold Chamber Die Casting များ
အခြားအ Casting ဝန်ဆောင်မှု
မြှုပ် Casting ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်
လူမီနီယမ် Die Casting
pump Valve အစိတ်အပိုင်းများ
Led Display Cabint ဖြစ်သည်
Die Casting ဗီဒီယို
အဘိဓါန် Scottish Gaelic
အဘိဓါန် Haitian Creole အဘိဓါန်
ကြေးသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းဝန်ဆောင်မှု - Custom Casting ကြေးတံဆိပ်အစိတ်အပိုင်းများ China Company
IATF 16949 ကြေးငွေသတ္တုစပ်အတွက် CAST ထုတ်လုပ်ခြင်း
ကြေး Casting ကဘာလဲ? ရှေးတရုတ်ကြေးဝါများကိုမူလကသဘာဝကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှန်မင်းဆက်အစောပိုင်းတွင်ကြေးနီဖြူသတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောကြေးဝါသွန်းရန်အတွက်မီးကို အသုံးပြု၍ ရနိုင်သည်။ လက်ရှိတရုတ်ရှေးဟောင်းကြေးနီထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများသည်အဓိကအားဖြင့်ပန်ကာသတ္တုများကိုအသုံးပြုသည်။ ရှုပ်ထွေးသောအဆောက်အအုံများနှင့်ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများရှိသည့်ကြေးနီအနည်းငယ်ကိုရှုံးနိမ့်သောဖယောင်းနည်း၊ သတ္တုစပ်ပုံ၊ ဂဟေဆော်နည်းဖြင့်အသုံးပြုသည်။ တန်ဆာအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်အသားများ။
Cast bronze သည်မူလကသံဖြူကိုသာရည်ညွှန်းသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုစပ်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့်သံဖြူကြေးအစားအခြားကြေးအမျိုးအစားများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အလူမီနီယမ်ကြေးဝါ၊ ဆီလီကွန်ကြေးဝါ၊ မန်းဂနိစ်ကြေးဝါ၊ ခရိုမီယမ်ကြေးဝါ၊
Cast bronze သတ္တုများပုံသွန်းထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်ကြေးဝါဖြစ်ပါတယ်။ ကြေးနီသတ္တုများကိုသတ္တုများထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများ၊ သင်္ဘောများ၊ မော်တော်ကားများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောသွန်းလောင်းကြေးများသည်သံဖြူ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ မန်းဂနိစ်ကြေးနှင့်အလူမီနီယံကြေးများဖြစ်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ကကြေးဝါပစ္စည်းသွန်းရန်လိုအပ်ပါသလား? Minghe သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းသတ္တုများထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးကြေးနီသတ္တုများထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အီလက်ထရောနစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အစားအစာ၊ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ၊ စက်မှု၊ မော်တော်ယာဉ်၊ ၃၅ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်ထက်ကျော်လွန်မည့်တိကျသောထုံးစံဖြစ်သောကြေးဝါအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နည်းပညာနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သွန်းလောင်းခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသွန်းခြင်း၊ သဲပုံခြင်း၊ သေဖြတ်ခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်း၊ ကွေးခြင်း၊
Tin ကြေးဝါ၏ Casting
Cu-Sn အလွိုင်း၏အသံအတိုးအကျယ်ကျုံ့မှုသည်အလွန်သေးငယ်သည် (linear shrinkage rate သည် ၁.၄၅% မှ ၁.၅%) ဖြစ်ပြီးရှုပ်ထွေးသောသတ္တုများပုံသဏ္accurateာန်များဖြင့်တိကျသောပုံစံများနှင့်လက်မှုပညာများထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ခဲသတ္တုများကိုသွပ်၊ ကြေးနှင့်ဖော့စဖရပ်စ်စသည့်ပစ္စည်းများတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဖော့စဖိတ်များသည်မာကျောခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ wear-resistance tin tin bronze တွင် ၁.၂% အထိပါဝင်နိုင်သည်။ သွပ်သည်၎င်းသတ္တုစပ်၏သွက်လက်မှုနှုန်းကိုတိုးတက်စေပြီးသံဖြူကြေးဝါ၏အသားအရောင်ခွဲခြားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ခဲသတ္တုအလွိုင်း၏ wear ခုခံနိုင်မှုနှင့်စက်ယန္တရားနိုင်မှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။ သံဖြူသောကြေးဝါကို wear -proof နှင့် corrosion-resistance အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
- Tin phosphor bronze ။ Phosphorus သည်ကြေးနီသတ္တုစပ်အတွက် Deoxidizer ကောင်းသည်။ ၎င်းသတ္တုစပ်သည်အရည်၏မြင့်မားမှု၊ သံဖြူ၏ကြေးနီလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုးတက်စေသော်လည်း၊ သံဖြူကြေးဝါရှိဖော့စဖရပ်၏အဆုံးစွန်တွင်ပျော်ဝင်နိုင်မှုသည် ၀.၁၅% ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အကျွံဖြစ်လာသောအခါα + δ + Cu0.15P ternary eutectic ကို ၆၂၈a၏အရည်ပျော်မှတ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပူသောအပူလောင်နေစဉ်ကာလအတွင်းပူပြင်းသည့်အပူရှိန်ကိုထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးအအေးခန်းကိုသာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပုံပျက်သော tin bronze တွင်ပါ ၀ င်သော phosphorus သည် ၀.၅% ထက်မကြီးသင့်ပါ။ ပူပြင်းစွာအလုပ်လုပ်နေစဉ် phosphorus သည် ၀.၂၅% ထက်နည်းသင့်ပါသည်။ ဖော့စဖရပ်ပါဝင်သောသံဖြူသည်လူသိများသော elastic ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်စဉ်အတွင်းအအေးမခံမှီအပူချိန်နှင့်အပူချိန်နိမ့်သောနေရာများတွင်ရှူရှိုက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အစွမ်းထက်သော elastic modulus နှင့်ကောင်းသော - စပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကုန်ကြမ်းများ၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်ကြမ်း - ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများထက်ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း၊ အအေးခံသည့်ပစ္စည်းကိုအပူချိန် 3-628 ° C တွင်အပူချိန် 0.5-0.25 ° C တွင် 200 မှ 260 နာရီထားရှိပြီး၎င်းသည် annealing hardening effect ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်၊ ပလပ်စတစ်၊ elastic ကန့်သတ်ချက်နှင့်ထုတ်ကုန်၏ elastic modulus တို့ကိုပိုမိုတိုးတက်စေပြီး elasticity ၏တည်ငြိမ်မှု။
- Tin-zinc ကြေးဝါ။ ကြေးနီနှင့်သံဖြူသတ္တုစပ်များတွင်သွပ်ပမာဏအများအပြားပျော်ဝင်ပြီးသံမဏိပြားများတွင်အသုံးပြုသောသွပ်ပမာဏသည်များသောအားဖြင့် ၄% ထက်မပိုပါ။ သွပ်သည်အလွိုင်း၏လျော့ပြေမှုအားတိုးတက်စေခြင်း၊ ပုံသွင်းအပူချိန်ကိုကျဉ်းမြောင်းစေပြီးပြောင်းပြန်အသားအရောင်ခွဲခြားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
- Tin-zinc-lead ကြေးဝါ။ ခဲသည်ကြေးနီဖြူသတ္တုစပ်တွင်အမှန်တကယ်ပျော်ဝင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည် dendrites တစ်ခုအကြားအနက်ရောင်ပါဝင်မှုအဖြစ်ဖြန့်ဝေသည်။ Inotot အတွင်းခဲကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်တူညီရန်မလွယ်ကူပါ။ များသောအားဖြင့်နီကယ်အနည်းငယ်ကိုထည့်လိုက်ခြင်းသည်၎င်း၏ဖြန့်ဖြူးမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးတည်ဆောက်ပုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ခဲသည်သံဖြူ၏ကြေးပွတ်တိုက်နိုင်မှုကိုလျော့ကျစေသည်။ 3% မှ 5% Zinc ကိုမကြာခဏကြေးနီဖြူခဲသတ္တုစပ်များတွင်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည်။ 0.02% ～ 0.1% zirconium သို့မဟုတ် 0.02% ～ 0.1% boron ကိုထည့်သွင်းခြင်း, အထူးသဖြင့် 0.02% ～ 0.2% ရှားပါးဒြပ်စင်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ခဲအမှုန်များကိုသန့်စင်စေပြီးအညီအမျှဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ သံဖြူကြေးဝါင်။
ခဲသတ္တုများကိုပုံသွင်းခြင်းသည်မြင့်မားသောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ၊ ချေးခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အရည်ပျော်လွယ်ခြင်းနှင့်သတ္တုသိပ်သည်းသောသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
- သံမဏိ၊ သံ၊ နီကယ်နှင့်အခြားဒြပ်စင်များနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးမဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုများကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်အပူချိန်မြင့်မားစွာအလုပ်လုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများပြုလုပ်ရန်သင့်လျော်ပါသည်။
- သံမဏိ၊ မန်းဂနိစ်၊ နီကယ်နှင့်အခြားဒြပ်စင်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသောအလူမီနီယမ်ကြေးဝါများကိုယေဘုယျအားဖြင့်သံမဏိများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး၎င်းသည်ခိုင်ခံ့မှုနှင့်ချေးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများပြုလုပ်ရန်သင့်လျော်ပါသည်။
အမှတ်တံဆိပ် အမည်ခံဖွဲ့စည်းမှု /% လြှောကျလှာ
ရှုပ်ထွေးသောပုံသွန်းခြင်း၊ အဆို့ရှင်များ၊ စုပ်စက်ကိုယ်ထည်များ၊ ဂီယာများ၊ တာဘိုင်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။
မြင့်မားသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အလတ်စားလျှောမြန်နှုန်းအောက်တွင်အလုပ်လုပ်သောဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ချေးခြင်းကိုကာကွယ်သည့်အပိုင်းများ
လျှောမြန်နှုန်းနှင့်အထွေထွေ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုရှိသည့်အ ၀ န်း
အကြီးစားစက်ယန္တရားများအတွက်ရိုးတံနှင့်မြင့်မားသော - အစွမ်းထက် wear- ခံနှင့်ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်အစိတ်အပိုင်းများ
ချေးနိုင်သည့်ခံနိုင်စွမ်းအားမြင့်မားသည့်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်း၊ ၄၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအဝတ်အစားခံနိုင်ရည်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများ
Minghe Casting သည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ Dongguan တွင်တည်ရှိပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ အဓိကအားဖြင့်ကြေးနီသတ္တုစပ်နှင့်လူမီနီယံသတ္တုစပ်များအထူးအဆင့်အတန်းများပုံသွင်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကြေးနီအလွိုင်းအဆင့်များတွင် aluminium bronze, silicon bronze, aluminium ကြေးဝါ၊ aluminium nickel bronze, tin tin bronze, manganese ကြေးဝါ၊ ကြေးနီနီ၊ ကြေးဝါစသည်တို့ပါဝင်သည်။ စသည်တို့ကို etc, ပစ္စည်းများ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်ကိရိယာများရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူ။ အပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများတွင်အထွေထွေခုံများ၊ ကြိတ်စက်များ၊ CNC စက်များ၊
ကြေး Casting ၏ Minghe ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာရေး
Minghe Casting လုပ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဒီဇိုင်းကိုလက်တွေ့အဖြစ်နှင့်သင့်အလူမီနီယံသတ္တုများပုံသဏ္partsာန်၊ သွပ်သတ္တုများပုံခြင်း၊ မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုများပုံသွင်းခြင်း၊ တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ အပိုင်းများနှင့်ထို့ထက်ပို။
Casting Parts Cases Studies နောက်ထပ်ကြည့်ရှုရန်သွားသည်။ >>>
ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ Sout Africa နှင့်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိအခြားနိုင်ငံများသို့တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO9001-2015 မှတ်ပုံတင်ထားပြီး SGS မှအသိအမှတ်ပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံဖြစ်သောကြေးဝါသတ္တုများပုံနှိပ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်မော်တော်ယာဉ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ လေကြောင်း၊ အီလက်ထရွန်နစ်၊ အစားအစာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ အချိန်တိုအတွင်းမှာအခမဲ့ကိုးကားရန်သင်၏မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်သို့မဟုတ်သင်၏ပုံဆွဲခြင်းကိုမြန်မြန်ပို့ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရန် sales@hmminghe.com ကျွန်ုပ်တို့၏လူ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည်သင်၏ကြေးဝါသတ္တုများထုတ်လုပ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုမည်သို့ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်ကိုကြည့်ရန်။
ကျနော်တို့ Casting န်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်:
Minghe Casting ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သဲသွပ်ခြင်း၊ သတ္တုသွပ်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင်မြှုပ်နှံခြင်းများနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
သဲကာစ် မှိုပြုလုပ်ရန်အဓိကမော်ဒယ်လ်အဖြစ်သဲကိုအသုံးပြုသောရိုးရာသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ မြေထုဆွဲအားကိုသဲမှိုများတွင်ယေဘူယျအားဖြင့်အသုံးပြုကြပြီးအထူးလိုအပ်ချက်များရှိပါကဖိအားနည်းသောသတ္တုများပုံသွန်းခြင်း၊ သဲပုံသွန်းလောင်းခြင်းသည်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောအမျိုးမျိုးသောအပိုင်းအစများ၊ သေးငယ်သောအပိုင်းအစများ၊ ကြီးမားသောအပိုင်းအစများ၊ ရိုးရှင်းသောအပိုင်းအစများ၊ ရှုပ်ထွေးသောအပိုင်းအစများ၊ တစ်ခုတည်းသောအပိုင်းအစများနှင့်အမြောက်အများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
အမြဲတမ်းမှို Casting ရှည်လျားသောသက်တမ်းနှင့်မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားတိကျမှုနှင့်ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ရှိရုံသာမကသဲသွပ်သတ္တုများထက်စွမ်းအားပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်တူညီသောသွန်းသောဒြပ်စင်သွန်းလောင်းသောအခါပျက်စီးမှုနည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သတ္ထုစပ်နှင့်အသေးစားသတ္တုစပ်များထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်သတ္တုများအရည်ပျော်မှတ်သည်မြင့်မားလွန်းသဖြင့်သတ္တုများသွန်းလောင်းခြင်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။
၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသတ္တုများပုံသွန်း အကြောင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံသွန်းများသည်မြင့်မားသောအရွယ်အစားတိကျမှုနှင့်မျက်နှာပြင်အနိမ့်အမြင့်များရှိသောကြောင့်သူတို့သည်စက်လုပ်ငန်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ သို့သော်ပိုမိုမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအနည်းငယ်သာချန်ထားနိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံသွန်းနည်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများစွာကိုကယ်တင်ခြင်းနှင့်လူသား၏နာရီများကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်သတ္တုကုန်ကြမ်းများကိုများစွာသက်သာစေနိုင်သည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
အမြှုပ်သွန်းဆုံးရှုံးသွားသော paraffin ဖယောင်းသို့မဟုတ်အမြှုပ်မော်ဒယ်များကိုပုံတူအရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္similarာန်နှင့်ဆင်တူသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောသုတ်ဆေးများကိုဆေးကြောပြီးခြောက်သွေ့ပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုတုန်ခါမှုပုံစံအတွက်ခြောက်သွေ့သောသွပ်တွင်း၌မြှုပ်နှံပြီးပုံစံကိုသဘာ ၀ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်ရန်အနှုတ်ဖိအားအောက်တွင်သွန်းလောင်းသည်။ , သတ္တုအရည်သည်မော်ဒယ်၏အနေအထားကိုယူထားပြီးခဲနှင့်အအေးခံပြီးနောက်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနည်းအသစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Die Casting လုပ်ခြင်း
Die Casting သည်သတ္တုသွန်းခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မှို၏အခေါင်းပေါက်ကို အသုံးပြု၍ သွန်းသောသတ္တုများကိုမြင့်မားသောဖိအားပေးခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ မှိုများကိုများသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောသတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ကြပြီးဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဆေးထိုးခြင်းပုံသဏ္somewhatာန်နှင့်ဆင်တူသည်။ အဓိကအားဖြင့်သွပ်၊ သံ၊ ကြေးနီ၊ လူမီနီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ခဲ၊ သံဖြူနှင့်ခဲ - tin သတ္တုစပ်များ၊ Minghe သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည် သွန်း casting ဝန်ဆောင်မှု 1995 ကတည်းက။
centrifugal Casting အရည်သည်သတ္တုအရည်ကိုမြန်နှုန်းမြင့်လှည့်မှိုသို့ထိုးသွင်းသည့်နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့မှသာသတ္တုအရည်သည်မှိုကိုဖြည့ ်၍ သတ္တုစပ်ပုံသွန်းရန်ဗဟိုပြုရန်ရွေ့လျားမှုဖြစ်သည်။ centrifugal လှုပ်ရှားမှုကြောင့်သတ္တုအရည်သည်မှိုကိုကောင်းစွာရေဒီယိုလမ်းကြောင်းဖြင့်ကောင်းစွာဖြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သတ္တု၏ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်ကိုသက်ရောက်သည်။
အနိမ့်ဖိအား Casting ဆိုလိုသည်မှာမှိုသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ထားသော crucible အထက်တွင်ထားရှိပြီးအရည်ပျော်သောသတ္တု၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖိအားနိမ့် (0.06 ～ 0.15MPa) ဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖိအားနိမ့် (crucible) သို့မိတ်ဆက်ပေးသည်။ မှိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ခိုင်မာတဲ့သတ္တုများပုံသွန်းနည်းလမ်းထိန်းချုပ်ရန်။ ဤသတ္တုများပုံသွန်းနည်းသည်ကောင်းမွန်သောအစာအာဟာရနှင့်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိပြီးပါးလွှာသောပါးလွှာသောရှုပ်ထွေးသောသတ္တုများသွန်းလောင်းရန်လွယ်ကူသည်။ အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှု, အလိုအလျောက်နားလည်သဘောပေါက်ရန်လွယ်ကူသည်။
ဖုန်စုပ်ခြင်း သတ္တုများကိုလေဟာနယ်ထဲ၌အရည်ပျော်၊ သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ပုံသွင်းခြင်းတို့တွင်ပြုလုပ်သောသတ္တုများထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ လေဟာနယ်ဖြင့်သွန်းလောင်းခြင်းသည်သတ္တုထဲတွင်ဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး၊ ဤနည်းသည်အထူးတောင်းဆိုသောအထူးသံမဏိသတ္တုများနှင့်အလွန်လွယ်ကူစွာဓာတ်တိုးနိုင်သည့်တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ Minghe Casting တွင်လေဟာနယ်ပုံသွန်းခွဲစက်ရုံရှိသည်။ ၎င်းသည်လေဟာနယ်ပုံသွန်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပြallနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်
Minghe Die Casting China Company သည်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတွင်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကိုတီထွင်ခဲ့သည်
Facebook က တွစ်တာ LinkedIn တို့ Youtube ကို Instagram ကို
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Dongguan Minghe Die Casting Company